Land for Sale in Ahlone - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Lands for Sale in Ahlone
🌲အလုံမြို့နယ်အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း 🌲အနီးအလုံခန်းမနားတွင်ပေအကျယ် 🌲(25×50)(မြေ)/(ဂရန်အမပ)ခံ�...
Ad Number S-10018536
540,000 Lakh (Kyats) (Price Per Sqrt Ft)
Ad Number S-9957120
320,000 Lakh (Kyats) (Price Per Sqrt Ft)
Ad Number S-9957088
အလုံမြိုနယ် ၊ ဒဂုံမြို့နယ် ရှိ တော်ဝင်လမ်း ၊ အလုံလမ်း၊ ဗဟိုလမ်း ၊ ပြည်လမ်းတို့အနီး...
Ad Number S-9894462
Ad Number S-9833669
Ad Number S-9822915
အလုံ ကြည်မြင်တိုင်ကမ်းနားလမ်းကျောကပ်မှ ဂရန်မြေ
Ad Number S-9822862
အလုံ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းနောက်ကျောမှ ဂရန်မြေ
Ad Number S-9822417
Ad Number S-9813245
SL20-002794, For Sales Land , ကမ္းနားလမ္း အလုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္သီးသန္႔ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
138,390 Lakh (Kyats)
Ad Number S-9764581